‘स्मार्ट सिटी’को आशामा सास्ती खेप्दै यात्रु | नेपाली पब्लिक ‘स्मार्ट सिटी’को आशामा सास्ती खेप्दै यात्रु | नेपाली पब्लिक
होमपेज / फिचर | समाचार | समाज |
‘स्मार्ट सिटी’को आशामा सास्ती खेप्दै यात्रु
अरिष्मा मोक्तान २०७६, १२ असार बिहीबार १४:००
काठमाडौँ – मध्यान्हको चर्को घाम, सबैको हातमा छाता, हतारिँदै लाइनमा बसेको दृश्य। झट्ट हेर्दा फाराम भर्ने लाइन हो कि जस्तो। गर्मीको मौसम, टन्टलापुर घाममा हातमा केही न केही लिएर घामको रापलाई छल्दै बसेको त्यो दृश्य देख्नासाथ केको लाइन हो भनेर सोध्न बाध्य बनाउँछन्। यो दृश्य हो रत्नपार्कको शान्तिबाटिका सडकको।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी छेउमा भएका कारण कतिले त महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा रिपोर्ट दिन वा केही अन्य कामले लाइन बसेको जस्तो साेझै अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर, त्यहाँको वास्तविकता भने छुट्टै छ।
वास्तवमा त्यो लाइन गन्तव्यमा पुग्नका लागि सवारीसाधन कुरेर बसेको लाइन हो। एउटा गाडी आउँछ र अट्ने जति चढ्छन्। केही मानिसहरू चढेपछि घटेजस्तो देखिन्छ तर मानिसहरू थपिने क्रम भने रोकिँदैन। उनीहरू लाइनमै बसेर पुनः अर्को गाडीको प्रतीक्षामा बस्छन्। यो दृश्य एक दिन मात्र होइन, हरेक दिन बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म नै निरन्तर चलिरहन्छ।
त्यही स्थानको विपरीत दिशामा वरिपरि सवारीसाधन तथा मानिसहरूको भीड, कोही सामान बेच्दै गरेको, अशक्त व्यक्तिहरू सहयोग माग्न गीत गाउँदै बसेको, यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्नका लागि गाडीहरू कुरिरहेको, कोही व्यक्तिहरू आफ्नो मान्छेलाई प्रतीक्षा गरिरहेको, सवारी सहचालकहरू भने सातदोबाटो, कलंकी भन्दै आवाज दिइरहेको सुन्न र देख्न सकिन्छ।
रत्नपार्कजस्तो ब्यस्त स्थानमा सडकबीचमा नै गन्तव्यमा पुग्नका लागि लाइन बस्नुपर्दा यात्रुहरूले सास्ती खेप्दै आइरहेका छन्। त्यहाँ लाइन बसेका यात्रुहरूमा थकित, गर्मीले चिन्तित अवस्थामा रहेको सजिलै अनुभव गर्न सकिन्छ। तर, यो यात्रुहरूको बाध्यता हो, गन्तव्यमा पुग्नका लागि लाइनमा बस्नैपर्छ। अधिकांश लाइनमा बसेका ती सर्वसाधारण यात्रुहरूको गन्तव्य सूर्यदक्षिण हाइट, बानियाँटार हाइट र भत्केको पुलसम्म हो। त्यसैगरी, अर्को रुट छ बूढानीलकण्ठसम्मको। जसमा बानियाँटारको रुटमा २३ वटा सवारीसाधन आवातजावत हुन्छन् भने बूढानीलकण्ठका लागि पाँचवटा मात्र सवारीसाधन रहेका छन्।
चर्को घाममा हातमा छाता लिएर लाइनमा बसिरहेकी बानियाँटार घर भएकी उशा श्रेष्ठ भन्दै थिइन्, ‘यस्तो चर्को घाममा कति उभिएर बस्ने होला ? लाइन यत्रो छ, पालो कहिले आउनु, उभिँदा उभिँदा खुट्टा दुखिसक्यो।’ यो उनले हरेक दिन भोगिरहेको नियति हो। किनकि उनी सँधै आफ्नो ट्युसन कक्षा सकाएर घर जानका लागि प्रत्येक दिन त्यही लाइनमा बस्न अभ्यस्त छिन्।
यस्तै, घर जानका लागि लाइनमा बसिरहेका अर्का यात्रु ज्ञानेन्द्र आचार्यले भने, ‘अब यो लाइन भनेको बेलुकासम्मैका लागि हो। धन्न मानिसहरू लाइनमा बस्छन् र सजिलो छ, नत्र हामीजस्ता बुढाबूढीहरूका लागि त दिनभरि बसे पनि पालो नआउने स्थिति देखिन्छ।’ हतारिँदै मोबाइलमा बोल्दै आएकी सुनिता देवकोटा भने आफ्नो कोही आफन्तलाई सुनाउँदै थिइन्, ‘भर्खरै गाडी चढ्ने लाइनमा बसिरहेकी छु, कति बेला हुन्छ थाहा छैन।’ उनी ‘यस्तो चर्को घाममा न कुनै बस्ने ठाउँ न कुनै व्यवस्था। जे गर्दा पनि सर्वसाधारणलाई नै दुःख’ भन्दै अर्को साथीसँग कुरा गर्दै थिइन्।
रत्नपार्कबाट बानियाँटार, बूढानीलकण्ठ जाने गाडीका लागि सधैँ लाइनमा बस्नुपर्दा अत्यन्तै गाह्रो भएको अधिकांश यात्रुहरूको भनाइ छ। सो रुटका गाडी लगभग १५ मिनेटदेखि २० मिनेटको अन्तरालमा आउने गर्दछन्। गाडी आउने बेला अट्ने जति गाडीमा चढ्छन् र बाँकी फेरि त्यही लाइनलाई निरन्तरता दिन्छन्। यसरी नै हरेक दिन लाइन बसेरै यात्रा गरिरहेका छन् यात्रुहरू।
तर त्यसरी लाइन बस्दा आफूहरूलाई भने सजिलो भएको रत्नपार्कबाट बानियाँटारसम्मको रुटमा गाडी चलाउने एक चालकले बताए। उनले भने, ‘अरु ठाउँमा जस्तो कराइरहनु पर्दैन, मान्छेहरू भएनन् भन्ने हुँदैन, आउनेबित्तिकै गाडी भरिन्छ। अटेजति बोक्छौँ, त्यही भएर यो रुटमा गाडी चलाउन धेरै सजिलो छ।’
बानियाँटार र बूढानीलकण्ठ यात्रा गर्ने सर्वसाधारणका लागि रत्नपार्क शान्ति बाटिकामा न कुनै प्रतीक्षालय छ, न त कुनै अन्य बस्ने व्यवस्था। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्मार्ट प्रतीक्षालयको विषय बारम्बार निकालिरहँदा यात्रुहरूले रत्नपार्कमा गाडी कुर्नका लागि बस्नसमेत नपाइरहेको त्यो अवस्थाले महानगरपालिकालाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ।
गत मंसिर २४ गते बसेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले टुँडिखेल वरपर र अन्य केही मुख्य स्थानहरूमा स्मार्ट प्रतीक्षालय निर्माण गर्ने भनिएको थियो। त्यहीअनुसार महानगरले सर्वसाधारणहरूको समस्यालाई दृष्टिगत गरी स्मार्ट प्रतीक्षालय निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले जानकारी दिए। उक्त प्रतीक्षालयमा विभिन्न सेवा सुविधाका साथ निर्माण हुने उनले बताए।
उपत्यकाभित्र सर्वसाधारणका लागि उचित प्रतीक्षालय नभएका कारण यात्रुहरूले सास्ती भोग्दै आइरहेका छन्। प्रवक्ता डंगोलका अनुसार हाल महानगरले स्मार्ट प्रतीक्षालयका लागि कुन–कुन स्थानमा राख्ने भन्नेबारेमा अध्ययन गरिरहेको छ।
यो योजनाका लागि रिपोर्ट तयार गर्न वडा नम्बर १८ का अध्यक्षलाई जिम्मा दिइएको उनले त्यसैअनुरुप प्रतिवेदनसमेत तयार पारेर पेश गरिसकेको प्रवक्ता डंगोलले जानकारी दिए। प्रतिवेदनअनुसार अध्ययन गरेर छिट्टै स्मार्ट प्रतीक्षालयको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी महानगरले गरिरहेको उनले बताए।
यस्तै, यस योजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्मार्ट प्रतीक्षालयका लागि महानगरको खर्च नहुने गरी निर्माण गर्ने र बोलपत्र आह्वान गरिसकेपछि कम्पनीहरूलाई जिम्मा लाउने बताएका छन्।
स्मार्ट प्रतीक्षालय यात्रुहरूलाई दृष्टिगत गर्दै बस्न सजिलो हुने गरी बनाइएको ठाउँ हो, जुन हेर्दा आकर्षक पनि देखिन्छ र विभिन्न सेवा सुविधाको व्यवस्थासमेत उपलब्ध हुन्छ। यसमा यात्रुहरू पुग्ने गन्तव्यसम्मको बस कति बेला आउँछ ? कहाँ आइपुग्यो ? जस्ता सूचनासमेत यात्रुहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्। साथै, समयको पनि जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।